1. Raad-yar Sida magacu muujinayo, miis isku laaban waa miis la laaban karo. Tani waa astaamaha aasaasiga ah ee hal-abuurka miiska isku laaban. Haddii boosaska gurigaagu kooban yihiin, sax? Miisaska isku laaban ayaa faa'iido kuu leh adiga, fur markii aad u baahatid, laab markii aadan u baahnayn ...
Rumayso kor u kaca joogtada ah ee xamuulka badaha ee wakhtigan si loogu oggolaado warshadaha badan ee la xidhiidha, kaliya qiimaha, iyo taangiga way adag tahay in la helo, xitaa sheegida faaruq ayaa noqotay mid aad u adag, sababtoo ah ka hor intaan la isku hagaajin, taasoo keentay tiro badan oo wareeg ah awooddu kuma filna, marka loo eego ...
Dib-u-soo-kabashada dhaqaalaha macruufka iyo kororka heerka dhex-galka ee ganacsiga elektaroonigga ah, suuqa alaabta dibadda ee Shiinaha ayaa noqda mid caan ku ah. Warbixinta kormeerka cusub ee la sii daayay ee Xarunta Cilmi baarista xogta Shiinaha ayaa muujineysa in qeybtii hore ee sanadkan, transac ...
Noocyada isboortiga bannaanka waxay dardargelinayaan xawaaraha qaabka Shiinaha
Soo kabashada dhaqaalaha macro iyo kororka heerka dhexgalka ganacsiga e-commerce, suuqa ganacsiga e-commerce ee Shiinaha wuxuu noqdaa mid caan ah. Warbixinta kormeerka cusub ee la sii daayay ee Xarunta Cilmi-baarista Ganacsiga ee Shiinaha ayaa muujineysa in qeybtii hore ee sanadkan, heshiiska ...